FBI-da Mareykanka oo Suudaan ka bilowday baarista qaraxii lagu weeraray Ra’iisul Wasaare Xamduuk. - Awdinle Online
FBI-da Mareykanka oo Suudaan ka bilowday baarista qaraxii lagu weeraray Ra’iisul Wasaare Xamduuk.
March 14, 2020 (Awdinle Online) –Faysal Maxamed Saalax Wasiirka Warfaafinta Suudaan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xubno katirsan Waaxda Dambi baarista Mareykanka ee loo soo gaabiyo FBI ay guda galeen baaris lagu sameynayo qarax uu ka badbaaday Ra’iisul Wasaare Cabdalla Xamduuk.
9-kii bishaan ayuu dhacay falkaan isku dayga ah ee lagu doonayay in lagu khaarijiyo Ra’iisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk, wixii xiligaas ka dambeeyay waxaa socday baaris ay wadaan Hay’adaha ammaanka iyo kuwa sirdoonka.
“Xubno baarayaal ah oo katirsan Hay’adda FBI ayaa Suudaan soo gaaray, waxa ay Khartuum u yimaadeen waa in ay baaraan isku daygii dhicisoobay ee la doonayay in lagu dhibaateeyo Jamhuuriyadda Sudan” sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay Wasiirka Warfaafinta Sudan.
Sirdoonka Sudan kama aysan quusan baarista tan iyo isniintii todobaadkii tagay oo ku beegan waqtiga uu shirqoolka dhicisoobay, waxaana ku biiray baarayaal sare oo katirsan Sirdoonka Mareykanka.
Xukuumadda Washington ayaa dhankeeda qiratay in baarayaal aysan sheegin tiradooda in ay gaareen Suudaan Arbacadii, maalin kadib waqtigii uu dhacay weerarka lagu dili rabay Cabdalla Xamduuk Ra’iisul Wasaaraha Sudan.
Kulan Ra’iisul Wasaaraha Sudan uu la qaatay Laamaha ammaanka dalkaas waxa uu weydiiyay in ay ku filan yihiin Baarista qaraxa lala damacsanaa in lagu dilo, waxaana uu doonayaa Cabdalla in la ogaado cidda ka dambeysay iyo waxyaabaha uu ka koobnaa.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha Sudan waxa uu dalbaday in cid waliba oo aqoon fog u leh baarista qaraxyada in ay ka gacansiiso baaritaanada, iyaga oo caawinaya Hay’adaha sirdoonka Sudan, waxaana durba ka jawaabay Mareykanka, sidaasi waxaa warrisay warbaahinta Gudaha.
Previous articleKooxo Burcad Koonfur Afrikan oo Muwaadin Soomaaliyeed ku diley dalka
Next articleDigniin loo Diray Maraakiibta sida sharci darrada ah ugu Kaluumeysta biyaha somaliya